I-Scienceherb yenye yeecandelo zokumisela izityalo zase China, ezithatha inxaxheba kuphuhliso lwemigangatho yecandelo lokuvelisa izityalo zase China; ulilungu le-China Chamber of Commerce yokuNgenisa kunye nokuThumela ngaphandle kwiMayeza kunye neeMveliso zezeMpilo, umxhasi osungula umbutho weHelan Providence Extract Association, kunye neshishini eliphakamileyo kwiyunithi yaseHenan.
I-Scienceherb iseke ubudlelwane bobuchule bentsebenzo kunye neLebhu yaseHenan Key Laboratory yeBiotechnology, iYunivesithi yaseHenan, kwaye iqhubele phambili ngokwenza impumelelo enkulu kwitekhnoloji yokutsala izityalo zaseShayina. Izicatshulwa zamachiza zaseTshayina eziveliswa yinkampani zilandela ngokuqinileyo imithetho nemigaqo efanelekileyo kwiimveliso zezempilo, izimonyo kunye nokutya. Inkampani idlulise iziqinisekiso ezininzi ezifana neKosher, FDA, USDA ORGANIC.